ခလုတ်လေး တစ်ချက်သာနှိပ်လိုက်ပါ — MYSTERY ZILLION
Ashampoo က ထုတ်တဲ့ One Click Optimizer လေးပါ
မှတ်မိကြမှာပါ ဟိုတလောက ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ thread လေး၊ အဲဒီ software ထုတ်တဲ့ဆီကပါ
သုံးကြည့်တာ ကောင်းပါတယ် file တွေတော့ တော်တော် ရှင်းသွားပေးတယ်
ကောင်းတယ်ဗျို့ internet connection လဲ Optimize လုပ်လို့ရကြောင်းပါ.
& Windows 7. It has one very good feature which is The
Ashampoo Winoptimizer 2010 Features
တစ်ပါတည်းပေးချင်တာက Recover-my-files V4.4 အရင်က ကိုexiterတင်ထားတာ 3.97 ရှိပါတယ် အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
вЂў Recover deleted email
вЂў Recover deleted documents
вЂў Recover deleted archives
вЂў Digital Photo recovery
вЂў Recover deleted music and video
вЂў Deleted Files;
вЂў Lost Files;
вЂў Formatted Disks;
вЂў RAW Disks;
вЂў Missing Drive Letters;
вЂў Windows Reinstalls.
вЂў Hard drives
вЂў USB drives
вЂў External storage units
вЂў Digital camera storage media
вЂў CDs and DVDs
вЂў FAT16 - an early version of the FAT Filesystem, now rarely used
вЂў FAT32 - common for external storage media and digital camera equipment
вЂў exFAT - (Extended File Allocation Table),aproprietary file system suited especially for flash drives
вЂў GPT - GUID Partition Table,astandard for the layout of the partition table onaphysical hard disk
вЂў NTFS - Standard files system for Windows Vista, Windows 7
вЂў CDFS - CD/DVD file systems (Coming Soon)
вЂў MAC - HFS (Coming Soon)
вЂў EXT2 - Linux (Coming Soon)
вЂў RAID - RAID JBOD, 0, 1, 5, hardware and software
င်္File size : 18.85MB
တစ်ပါတည်းပေးချင်တာက Recover-my-files V4.4 အရင်က ကိုexiterတင်ထားတာ 3.97 ရှိပါတယ် အသစ်ထွက်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် :
download link လေး ပြန်စစ်ပေးပါအုံး အစ်ကိုရေ...
အကို လင့်ခ် လေး ပြန်စစ်ပေးပါအုံး လိုချင်လို့ လာဒေါင်းဖို့ ရှာတာ လင့်ခ်က မရတော့ဘူး ifile နဲ့ပဲ တင်ပေးပါဗျာ . နောက်ပီး ဒီဟာက ဒီဗွီဒီ ခွေကိုရော recovery လုပ်လို့ရလား သိချင်ပါတယ် . . . :cool: :cool: :cool:
အဲ့ One Click ဆိုတာလေးက လုပ်ပြီးရင် Recycle Bin မှာ ပြည့်နေတာပဲ။အဲ့ဒါတွေ အကုန်လုံးဖျတ်ပစ်လိုက်ရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။အဲ့ဒါတွေက ဖျတ်ပစ်ရမှာလား။ဒါမှ မဟုတ် ဘာလုပ်ရမှာလဲ။သူက ဘယ်လိုဖိုင်တွေကို Recycle Bin ထဲကိုရောက်စေတာလဲဆိုတာလေး ပြောပြပေးပါအုံး။ :rolleyes: